အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: June 2007
အဟာရနဲ့ရေမရလည်း အားအင်မလျှော့ခဲ့
ဇွဲ ခိုင်မာ.အင်အားစုကာ.ရုန်းကန်ရင်းနဲ့ 
ကျောက်သားစိုင်..ဘယ်လောက်ခိုင်လည်း တနေ့ တော့ကွဲ..
စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဇွဲလုံလ ဟာ..အဓိကသော့ချက်..
မသဒ္ဓါ (၆။၃၀ ။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:16 PM0comments Links to this post
Labels: Lyrics, poem, Politics
အမေ့ရဲ့ သားမိုက်..တိုင်းပြည်အတွက်တော့.မျိုးချစ် အာဇာနည်..
အမေ..မတွေ့ ရတာ..နှစ် ၂၀ နီးပြီ..
တနေ့နေ့ အောင်မြင်ချိန် ပြန်လာခဲ့မယ်.)
ကျွန်တော် .လမ်းပြတဲ့ အနာဂတ်အလင်းရောင်
ကျွန်တော် သေထိတိုင်ဦးမညွတ်မဲ့ သူ....
( စာအံသံ....ကလေးလေးတွေ ကျောင်းခန်းထဲမှာ..
ဘုရားရှစ်ခိုးတဲ့အခါ ကြုံရင် အမျှ ဝေ..
၈၈၈၈ ကျောင်းသားများ သို့ ဂုဏ် ပြု ပါသည်။ ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့ နိုင် တော့ သော မမ ၏ သူငယ်ချင်း များ။ မမ ၏ ကျောင်း ခေါ်ချိန် စာအုပ် ထဲမှ ထာဝရ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ သော.ခလေးငယ် အ မည် ကလေးများ။ အ ပြစ် မဲ့ မျက်နှာ ကလေး များ၊၊ ဖြူစင် သောအပြုံးရှင် ကလေးများ နှင့် မမတို့အောက်နှစ် တန်းမှ..ခလေးငယ် လေး များ။ မမတခါမျှ မသ်ိဘူး။ မမြင် ဘူး။ မသ်ိဘူး ခဲ့ သောခလေး ငယ်များ ။တော်လှန် ရေး တွင် ကျဆုံး ကြ သူ များ အားလုံးအား ဗမာ ပြည် သူများ နှင့် အမိအဖ များ၏ ကိုယ်စား မသဒ္ဓါ မှ အမျှ ဝေ ပါ သည်၊
အမျှ .. အမျှ.. အမျှ..ပါ ..သားတို့..သမီးတို့ ရေ..အားလုံး ကောင်းရာ သူဂတိ လား ကြ ပါစေ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:04 PM0comments Links to this post
အမဲဆီတရွှဲရွှဲ..နေရောင်ထဲမှာ
ဗမာသား ရဲ့အား..မလွယ်တာများ ကိုပိုမက်မောဆုံး
အားမလျှော့ကြနဲ့ မောင်ရို့ ..တခါ နဲ့ အမြဲမနိုင်..
စည်းရုံးမှု ရဲ့ စွမ်းအင်..လောက ကို အလှဆင်ရဲ့
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:55 PM0comments Links to this post
၁၉၆၂။ဇူလိုင်လရဲ့ (ရ) ရက်..မနက်ခင်း
သူမ ကလေ..သမဂ္ဂ.သပိတ်မှောက် ကျောင်းသူ..
ဒေါင်း အလံကိုင် ရမဲ့သူ..
ဒီိ..ရ ရက်မနက်ဘဲ..ကျနော်သမဂ္ဂ ထဲ ၀င်ခဲ့တယ်..
လက်ပါးစေ စစ်သား..သင် မသနား
လူအုပ် ကြားထည်း..မျက်ရည်ယ်ိုဗုံးနဲ့ တား
ယဲ့ ယဲ့ကလေးလွင့်နေတဲ့ ဒေါင်းလေးရဲ့အလံ..
ကျည်ဆန်ရာ ဇာပေါက် များ.
ဒေါင်းအလံလေးမှာ စွန်းတင် ခဲ့ပြီ သူ့ သွေးစက်
စီးကျနေတဲ့..သူ့ ရဲ့ သွေးကွက်..
ယမ်းငွေ့ မှုန်တိ မှုန် မွှား..စစ်သား တွေရဲ့ ကြား..
အရုပ်ကြိုးပြတ်သူမ အား..ကျနော် ပွေ့ ချီကာ ပြေးခဲ့
ကယ်သူမဲ့..ကုသမဲ့ အဖြစ်..သူ့ ကိုရေတိမ်မှာမနစ်စေလို...
အေးစက်စပြု လက် ကလေးများ ကိုဆုတ်ကိုင်.
၈ ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်း..၂ နာရီ
ဆံစလေးကိုပွတ်သက်ရင်း.သူမကြား အောင်ကျနော် ကြိတ်ခါ ငို
” အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ” လို့ သူအားထုတ်ရွတ်..
တက္ကသိုလ်မြေ ရဲ့ အပေါ် ကြွေပြီ..ပန်းလေးကံ့ကော်..
ထိုစဉ်ခဏ..အသံဆိုးကြီး `“အုံး `“ ဆို မြည်ကာ ပွင့်.
လွင့် လာတဲ့..အုတ်ကျိုးအကြေစ..ကျနော့ ခန္ဓာလည်း..ကြေမွ
နေ၀င်းအစိုးရက.သမဂ္ဂကို ဗုံးခွဲခဲ့တဲ့ အာရုဏ် မိုးသောက်စ
ကျနော်တို့ များ ရာဇ၀င်ထည်းမှာ..ချန်ထားခဲ့
(ဤ ကဗျာဖြင့်..မြန်မာအမျိုးသမီး ခေတ်အဆက်ဆက်..သပိတ်မှောက်ကျောင်းသူများကို..ဂုဏ်ပြုပါသည်.ယခုလက်ရှိ..မခင်မင်းဇော်အား..ရည်ရွယ်ခံစားထားပါသည်။ အရေးတော်ပုံအောင်ပါစေ ညီမလေးရေ)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:00 AM2comments Links to this post
မြန်မာမြေကို ကာကွယ်ပေးမဲ့ တပ်မတော်သား
ဒို့ ပြည်သူအများယုံကြည်. လေးစားပါရဲ့.
ဒို့ ပြည့်သူ့ နင်းပြားများကို။
ညှိ နှိုင်းတိုင်ပင်..ဒို့ အနာဂတ်ကို..အသစ်ပြင်နိုင်ပါတယ်..
မသူတော်တွေက..မင်း အာရုံတွေကိုမှိုင်းငွေ့ ချ..
အိုးမည်းသုတ်ထားခဲ့ ရတာလေးနဲ့ 
အသက်တွေပေးစွန့် စရာ..လိုသလား ညီငယ်..။
မင်းလည်းဗမာ.. ဒို့ လည်းဗမာ..
မြန်မာမြေပေါ် မွေးဖွားခဲ့တဲ့. ဒီမြန်မာလူ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:31 AM 1 comments Links to this post
၁၆ ရာစုရဲ့ ဘုရင့်နောင်..လက်ရုံးတန်ခိုးလျှမ်းလျှမ်းတောက်..
ကိုယ်ထီးနဲ့ ကြဌာန်း..စည်းစိမ်နန်းနဲ့ 
ကျက်သရေဝေဖြာ ဒို့ ပြည်မြန်မာ
အာရှရဲ့..စပါးကျီ..ဒို့ ရဲ့ မြန်မာပြည်..
အဘေးလက်ထက်က မြန်မာ.. အဘိုးလက်ထက်က မြန်မာ
အဖိုးလက်ထက်က မြန်မာ… အဖေ့လက်ထက်က မြန်မာ
ကျမလက်ထက်က မြန်မာ.. ဒို့ သမီးလက်ထက်ရဲ့ မြန်မာ
ဒို့မြေးလက်ထက်ရဲ့ မြန်မာ.. .. ဒို့ မြစ်လက်ထက်ကျ မြန်မာ..
ဆန်းစစ်ကြပါစို့ လေ..ဒို့ ဟာဘယ်အဆင့်ရဲ့မိဘတွေ..
အနှစ် (၆၀) ကျော်ကျွန်ဘ၀..ဖြစ်..
အာဏာရလက်မရွံ့ များက..အောင်လံကိုကြမ်းကြုတ်စွာနဲ့ ဆွတ်..
စုရုံးရင်..ဒို့ တွေအနိုင်ရ..စည်းရုံးရင် ဒို့ တွေအောင်မြင်မှုရ
အသိတရားနဲ့ ပါဝင်ကြ..လက်မတို့ ပါရစေနဲ့ ကိုယ်လူ..
AIDS နဲ့ TB လက်ချက်ကြောင့်..ဗမာမျိုးတဖြေးဖြေးပြတ်.
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၅၀ ကသိပ္ပံမောင်ဝက..ဒီလိုတွေးတော..
ဒို့ လည်းအခု..သူလိုတွေးတောဖို့ အချိန်တန်
ကျန်စစ်သားမင်းကသတ္တိရှိရှိ..သူ့ ဂတိကိုပြည်သူ့ အားပေး.
ချစ်ခင်သူနဲ့ ကွဲတဲ့ပြည်သူ့ မျက်ရည်..သုတ်ပေးလိုတဲ့မင်းကြီး
ညာလက်နဲ့ပေးမဲ့အစားအစာ.. ၀ဲလက်နဲ့ ကပေးမှာဝတ်တန်ဆာ..
လာဘ်စားဖို့ ဘဲကြည့်..စိန်ရဖို့ ဘဲသိ..
တဘို့ ထဲဘဲကြည့် …တိုင်းပြည်ရဲ့ ထရံတောင်ခွါရောင်းဖို့ ဘဲသိ..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:28 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၂)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မင်္ဂလာအတွက်..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:40 PM2comments Links to this post
အင်းယားရေပြင်မှာ ..ငါးကလေးတို့ တွေ..
ငြိမ်းချမ်းရေး.မိခင်. မေစု ရေ..
အမှောင်တွေလွတ်အောင်. ဒို့ အားလုံးဆုတောင်းနေ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၂)နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း တင်ပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:16 PM0comments Links to this post
ကဗျာ နဲ့မသဒ္ဓါ
ကဗျာ ရဲ့ အားမာန်၊ သဒ္ဓါ ရဲ့ အားမာန်
အားအပြည့်သန်စွာနဲ့မာန်အပြည့်ချီတက်။
ကဗျာ ရဲ့ အမှန်တရား၊ သဒ္ဓါ ရဲ့ အမှန်တရား
ကဗျာ ရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ သဒ္ဓါ ရဲ့ ရည်မှန်းချက်
ခေတ်အဆက်ဆက် အတွက် တိုင်းပြည်အတွက်။
ကဗျာ ရဲ့ ချွေးသွေး၊ သဒ္ဓါ ရဲ့ ချွေးသွေး
လူတန်းစားမရွေး.. ပေးဆပ်ဖို့ ဝန်မလေး။
ကဗျာ ရဲ့ အချစ်၊ သဒ္ဓါ ရဲ့ အချစ်၊
ကဗျာ ရဲ့ အသက်၊ သဒ္ဓါ ရဲ့ အသက်
ကဗျာ နဲ့ သဒ္ဓါ၊ သဒ္ဓါ နဲ့ ကဗျာ
ကဗျာ သဒ္ဓါ၊ သဒ္ဓါ ကဗျာ ခွဲကာ မရတဲ့
ဘ၀အဖေါ်မွန် ဖြစ်စေ၊ တည်စေသော်ဝ်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:11 PM 1 comments Links to this post
Labels: Cheer, poem
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:02 PM0comments Links to this post
သေသွားတဲ့..အခါ.. ဘာများမှ..ကိုယ်နဲ့ မပါ..
ပန်းများအသွင်မွေးပျံ့ စရာ..မင်းရဲ့နံမည်မှာသန့် ဖြူစင်..
နတ်လူ သာဓုလည်း ခေါ်စေချင်ရင်....
မသဒ္ဓါ (၆။၁၂။၂၀၀၇) ..( လူကြီးမင်း..များသို့ )
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:39 PM2comments Links to this post
ရှေ့ ပြန် နောက်ပြန်..
လက်ဖ၀ါးလေးနဲ့အလှုခံစား
ကြိုးဆွဲတဲ့ .. မျောက်ဆရာ..
သာဓုခေါ်လှဲ့ ပါ….မျောက်ကလေး ငယ်ငယ်..
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:25 PM0comments Links to this post
သို့ လော.. သို့ လော စဉ်းစား
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:28 AM2comments Links to this post
ဂုဏ်မာန နဲ့ အလှ..ဘယ်အရာကမှမမြဲဘူး
လာလာပြောမနေနဲ့ . ..သူငယ်ချင်း
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:09 PM0comments Links to this post
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:29 PM0comments Links to this post
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:55 AM0comments Links to this post
နာရီဆိုတဲ့ စက်ယန္တယား..တချက်ချက်နဲ့ခြောက်ခြား
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:52 PM 1 comments Links to this post
လောကရဲ့ နိယာမ….ပြန်လှန်သုံးသပ်မှု ဒဿန
နေခြင်း ရဲ့လောကဓံ ..
တွေဝေခြင်းရဲ့ မိစ္ဆာငယ်..
မသဒ္ဓါ ( ၅။၃၁။၂၀၀၇)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:53 PM0comments Links to this post
အမေ့ရဲ့ သားမိုက်..တိုင်းပြည်အတွက်တော့.မျိုးချစ် အာ...